गायिका गीता देवीको दशैं गीत ‘फर्क साईला’ बजारमा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । फर्क साईला अबत अतिभो गाउँ छोडेर हिडेको भन कती भो ? यस्तै मार्मिक शब्द हरुले सजिएको यसपालिको दशैं गीत भर्खरै सार्बजनिक भएको छ । गायक टेक बहादुर धिकारीको फर्क साईला नामक एल्बममा रहेको उक्त ग...
अछामी बड्डाले “डोटीकी छोर्याटी अछाम लैजादौ भयाँ” भनेपछि (भिडियो सहित)
काठमाडौं । यो अछामी बड्डो भाग- २ “डोटीकी छोर्याटी अछाम लैजादो भयाँ” देउडा गित सार्वजनिक भएको छ । गीतकार राजेन्द्र शाह विपिको शव्द र संगितमा तयार भएको उक्त गित युटुब मार्फत गएको विहिबार साँझ सार्वजनिक ...
काठमाडौं । फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ ले आक्रमक शुरुवात गरेको छ । फिल्म हेर्नका लागि दर्शकको उपस्थिती सबैजसो हलमा आक्रामक देखिएको छ । शुक्रबार बम्पर ओपनिङ गरेको फिल्मले शनिबार आफ्नो आक्रामक व्यापारलाई निर...
कपिल तामाङको ‘प्रतिक्षाको दिन गन्दै’ बजारमा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । गायक कपिल तामाङले हालै मात्र आफ्नो नयाँ गित लियर बजारमा आयका छन । उनको यो तेस्रो गित हो ! जस्मा निकै आसा लाग्दो मोडेल समीर लामा र क्रिस्टीना थापाले निकै दमदार अभिनय गरेका छन । उक्त गितको न...
बक्स अफिसमा छक्का पञ्जा-२ के होला ?
काठमाडौं । छक्का पञ्जाको सफलतापछि छक्कापञ्जा- २ बनाउन हौसिएका कलाकार जोडी दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला अहिले छक्का पञ्जा -२ निर्माण गर्ने क्रममै लफडामा परेका छन् । निकै प्रख्यात जोक्सहरु जोड...
काठमाडौं । फिल्म ऐश्वर्यको टिजर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक टिजरमा फिल्मको गुणस्तरियतासंगै द्वन्द समेत देखाइएको छ । फिल्म हलमा ‘ए मेरो हजुर २’ संगै यसटिजरलाई दर्शकले हेर्न पाउनेछन् । सार्वजनिक गीत ...
बरिष्ठ गीतकार थापालाई पाँचौं राष्ट्रिय श्रष्टा सम्मान प्रदान गरिने
काठमाडौं । गीतकार संघ नेपालले राष्ट्रिय श्रष्टा सम्मा २०७३ बाट बरिष्ठ गीतकार राजेन्द्र थापालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । गीतकार संघ नेपालले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरि यही भाद्र १३ गते पाँचौ राष्ट्र...
यसपालिको तिजमा एलिनाले कसलाई विन्ति विसाउँदै छिन् ?(भिडियो सहित)
काठमाडौं । संचारकर्मी एलिना दुलालले हरितालिका तिज २०७४ को अवसर पारेर “विन्ति छ मेरो” बोलको तिज गित पस्किएकी छिन् । तिजका गितहरुले मौलिकता विर्षिएको भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला दुलालले आफ्नै मौलिक शब्द र...
गीतकार अम्बिका गुरुङको ‘आएनौ छोरी’ बोलको तीज गीत बजारमा (भिडियोसहित)
गीतकार अम्बिका गुरुङको तीज गीत बजारमा आएको छ । रज्नी राइको आवाजमा 'आएनौ छोरी' बोलको मन छुने तीज गीतमा गीतकार गुरुङको शब्द रहेको छ भने संगीत प्रकाश लेप्चाले भरेका छन । गीतमा गीतकार अम्बिका गुरुङले तीज...
बानिका प्रधानको ‘बर्षिनु बर्षियो साउने झरी’ बोलको गीत सार्वजनिक(भिडियोसहित)
बानिका प्रधानको 'बर्षिनु बर्षियो साउने झरी' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । दीपक जङमको संगीत र मोनी शर्मा रिजालको शब्दमा रहेको गीतमा किरण कंडेलले एरेन्ज गरेका छन । गीतको भिडियो केही स...
गायक दिनेश रसाइलीको “थामी देउ हात” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
नेपाली गीत संगीतको बजारमा दिन प्रतिदिन बिभिन्न किसिमका गीत संगीतहरु सार्बजनिक हुदै आएका छन् । यसैक्रममा पछिल्लो समय नयाँ गीत ‘थामी देउ हात’सार्बजनिक भएको छ ।लामो समय देखि नेपाली गीत संगीतमा आबद्द हुदै...
“माईतिको आगानी “बोलको नयाँ तिज गीत सार्बजनिक (भिडियोसहित)
नारीहरुको महान चाड हरितालिका तिज नजिकिदै छ, त्यहि मौकालाई लक्षित गर्दै यो साल पनि "माईतिको आगानी दाजु-भाईले भरेनी" बोलको नयाँ तिज गीत सार्बजनिक भएको छ । सार्बजनिक गीतमा समना अर्यालको स्वर/शब्द तथा सं...
काठमाडौँ । हरेक वर्षका तीजमा पोइला जान पाम, लगायतका गीतहरु सार्वजनिक गरेर चर्चा कमाएकी चर्चित गायिका कोमल वलीले यस वर्ष भने भिन्न शैलीको गीतमा स्वर दिएकी छिन् । सुमित्रा कोइराला दाहालले फूल जस्तो ज...
शर्मिला श्रेष्ठको “ह्यान्सम पोइ” बजारमा (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, साउन १५ । काभ्रेली लोकगायिका शर्मिला श्रेष्ठको नयाँ तिजको गीत “ह्यान्सम पोइ” बजारमा आएको छ । इन हाउस क्रीयशनले बजारमा ल्याएको यस गीत लाई दिनेश लामाले संगीत दिएका छन । बिनोद बन्जाराको शब्द तथ...
गीति संग्रह ‘जुनि’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
"यो जुनिमा वाचुन्जेल सम्म तिम्रै मायाको हात चाहिन्छ !! एकमुठी सास रहुन्जेल सम्म तिम्रै साथ चाहिन्छ !! बोलको गीत नेपाली सांगीतिक ईतिहासमा पहिलो पटक "शब्द एक, संगीत अनेक"मा रहेर कलाकार निर प्रसाद गुरुङल...
हिन्दु नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तिज नजिकिदै जाँदा तीजका गीतहरुको लहर बढिरहेको छ । यसै क्रममा अर्को छुट्टै स्वादमा प्राप्ति पौडेलको “मरक्कै कम्मर भाँच मायालु” नामक तीज गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजन...
ग्ल्यामर नायिका शुभेच्छाले तीज गीतमा यसरी नाचेपछि…(भिडियो सहित)
अश्मिता धमला हमालको तीज गीत ‘नाचुँ छम छम छम’ मा रंगमञ्चकी एक ग्ल्यामर नायिकाकाको साथमा दुइ अभिनेत्रीको अभिनय रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियोमा चलचित्र क्षेत्रमा छुटटै पहिचान बनाएकी नायिका शुभेच्छा थाप...
श्रीमती जि को हैकम चले पछि कसरी जोइटिङ्रे बन्छन श्रीमान ?
काठमाडौं । शंकर अधिकारी घायलको लेखनर निर्देशनमा कला राइ को प्रस्तुती रहेको हास्य टेलि सिरियल जोइटिङ्रे को दोश्रो भाग रिलिज भएको छ। बिमला गीरी, तृष्णा खड्का ,राजन महर्जन ,राजकुमार गीरी,अनु राइ ठाकुर ग...
नायिका सुभेच्छा थापा र पल्पसा डंगोल अभिनित धमाकेदार तीज गीत आउँदै
नायिका सुभेच्छा थापा सिनेमा छेत्रमा व्यस्त र चर्चित नायिका हुन् । यसका वावजुद पनि उनी तीज गीतमा नृत्य गर्न तम्सिएकी छिन् । सबैखाले अभिनय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने थापाले यसपटकको तीजमा युवा निर्दे...
संघर्षको अर्को नाम गायक सुरज थापा
भनिन्छ जीवन एउटा संघर्ष हो । सघर्षबीनाको जीवनको कुनै अर्थ छैन ।सबैको जीवन संघर्षमय नै हुन्छ खाली मात्रा मात्र फरक । यस्तै संघर्षमय जीवन बोकेका कलाकार हुन् सुरज थापा । यथार्थमा भन्ने हो भने जीवन जीउ...